Kelam (2019) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားလေးကတော့ ၂၀၁၉ခုနှဈကမှထှကျရှိထားတဲ့အငျဒိုနီးရှား Horror ကားလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။နီနာဟာ ခဈြစဖှယျသမီးငယျလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သကျလတျပိုငျးအိမျထောငျသညျ အမြိုးသမီးတဈဦးပါ။
တဈညမှာတော့ သူမ အိပျပြျောနတေုနျးမှာ သူမတို့နဲ့အဝေးမှာနထေိုငျတဲ့သူမရဲ့ မိခငျ ကနျြးမာရေး ဆိုးရှားနတေဲ့ အတှကျသူမ ကိုလာခဲ့ဖို့ဆကျသှယျလာပါတယျ။သူမနဲ့သမီးဖွဈသူဟာ သူမငယျစဉျကနထေိုငျခဲ့တဲ့ မိခငျကွီးရဲ့ အိမျကို ရောကျသှားကွပွီးသူမရဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူကတော့ အလုပျတှကွေောငျ့ သူမတို့နဲ့ အတူတူ မလိုကျပါနိုငျခဲ့ပါဘူး။
သူမရဲ့ သမီးငယျဟာလညျးမှေးရာပါ နှလုံးရောဂါခံစားနရေတဲ့ ကလေးငယျတဈဦးဖွဈပွီးခှဲစိပျမှုပွုလုပျဖို့ စောငျ့ဆိုငျးနရေပါတယျ။
သူမ မိခငျကွီးရဲ့ အိမျကို ရောကျတဲ့အခါမှာ မိသားစုတှေ ပွနျလညျ ဆုံတှကွေ့ပမေယျ့အတိတျကပွသနာတခြို့ကွောငျ့ သူမနဲ့ မိခငျကွား ဆကျဆံရေးကောငျးမှနျခွငျးမရှိတာကိုသူမရဲ့ ညီမဖွဈသူထံမှ အပွဈတငျတာမြိုးကို ရငျဆိုငျကွုံတှရေ့ပါတယျ။
သူမသမီးငယျလေးရဲ့ ကနျြးမာရေးတဘကျ၊ မိခငျရဲ့ ကနျြးမာရေးကို တဘကျ နဲ့သူမနှငျ့ ညီမဖွဈသူဟာ ပွုစုစောငျ့ရှောကျရငျးပုံမှနျမဟုတျတဲ့ သဘာဝကိစ်စရပျတှကေို ရငျဆိုငျကွုံတှလေ့ာရပါတယျ။
သူမကိုယျတိုငျက စိတျဓာတျခကျထနျမာကြောသူတဈဦးဖွဈပမေယျ့ကွုံတှရေ့တဲ့ကိစ်စမြားဟာ သူမအတှကျ နားမလညျနိုငျစရာ ပဟဠေိတှဖွေဈလာပွီးအကွောငျးရငျးကို ရှာဖှဖေို့ သူမ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။
သူမလို အစစအရာရာပွညျ့စုံနတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦးအနနေဲ့မိခငျနဲ့ ဆကျဆံရေးမပွလေညျ ဖွဈစခေဲ့တဲ့ အကွောငျးရငျးက ဘာမြားဖွဈမလဲ?
သူမရဲ့ အတိတျကပွသနာဆိုတာကမြားရော ဘယျလိုပွသနာမြိုးလဲ?သူမသမီးလေးကို ထူးဆနျးတဲ့ အပွုအမူတှေ ပွုမူစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှကေရော ဘာတှမြေားဖွဈမလဲ?စတာတှကေို ရှာဖှတှေရှေိ့နိုငျဖို့ ကိုယျတိုငျ ကိုယျကြ ခံစားအားပေး ကွညျ့ရှုကွပါဦးခငျဗြာ။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ ၂၀၁၉ခုနှစ်ကမှထွက်ရှိထားတဲ့အင်ဒိုနီးရှား Horror ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နီနာဟာ ချစ်စဖွယ်သမီးငယ်လေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သက်လတ်ပိုင်းအိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ။
တစ်ညမှာတော့ သူမ အိပ်ပျော်နေတုန်းမှာ သူမတို့နဲ့အဝေးမှာနေထိုင်တဲ့သူမရဲ့ မိခင် ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားနေတဲ့ အတွက်သူမ ကိုလာခဲ့ဖို့ဆက်သွယ်လာပါတယ်။သူမနဲ့သမီးဖြစ်သူဟာ သူမငယ်စဉ်ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့ အိမ်ကို ရောက်သွားကြပြီးသူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကတော့ အလုပ်တွေကြောင့် သူမတို့နဲ့ အတူတူ မလိုက်ပါနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
သူမရဲ့ သမီးငယ်ဟာလည်းမွေးရာပါ နှလုံးရောဂါခံစားနေရတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးခွဲစိပ်မှုပြုလုပ်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေရပါတယ်။
သူမ မိခင်ကြီးရဲ့ အိမ်ကို ရောက်တဲ့အခါမှာ မိသားစုတွေ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ကြပေမယ့်အတိတ်ကပြသနာတချို့ကြောင့် သူမနဲ့ မိခင်ကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်းမရှိတာကိုသူမရဲ့ ညီမဖြစ်သူထံမှ အပြစ်တင်တာမျိုးကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါတယ်။
သူမသမီးငယ်လေးရဲ့ ကျန်းမာရေးတဘက်၊ မိခင်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို တဘက် နဲ့သူမနှင့် ညီမဖြစ်သူဟာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်းပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သဘာဝကိစ္စရပ်တွေကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။
သူမကိုယ်တိုင်က စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်မာကျောသူတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်ကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စများဟာ သူမအတွက် နားမလည်နိုင်စရာ ပဟေဠိတွေဖြစ်လာပြီးအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေဖို့ သူမ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
သူမလို အစစအရာရာပြည့်စုံနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့မိခင်နဲ့ ဆက်ဆံရေးမပြေလည် ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာများဖြစ်မလဲ?
သူမရဲ့ အတိတ်ကပြသနာဆိုတာကများရော ဘယ်လိုပြသနာမျိုးလဲ?သူမသမီးလေးကို ထူးဆန်းတဲ့ အပြုအမူတွေ ပြုမူစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကရော ဘာတွေများဖြစ်မလဲ?စတာတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ခံစားအားပေး ကြည့်ရှုကြပါဦးခင်ဗျာ။